Ingqungquthela yelizwe ye-4 ye-Equal Education (Ukulingana Kwemfundo) – Imibuzo Edla Ngokubuzwa (isiXhosa) | Equal Education
Ingqungquthela yelizwe ye-4 ye-Equal Education (Ukulingana Kwemfundo)
Imibuzo Edla Ngokubuzwa (isiXhosa)
Ukuba unemibuzo onayo Ngenqungquthela yethu, nceda ucele ukucaciselwa kubasebenzi bakwa-EE kwiphondo lakho okanye uthumele imibuzo onayo kuWhatsApp wakwa-EE! (021 361 0127)
Yintoni Ingqungquthela yelizwe yakwaEqual Education (EE)?
Ingqungquthela yelizwe lixesha elibalulekilieyo kwi-EE. Kwenziwa ezi zinto zilandelayo kule Ngqungquthela:
Kuxoxwa kuze kwamkelwe izinto ezitshintshwayo kumgaqo-siseko wakwaEE;
RIzisombululo ngezinto eziphambili zepolitiki nezamaphulo akwaEE ziyamkelwa;
Amalungu atsho azi aze axoxe ngemiba yemfundo neepolitiki;
Ingqungquthela yindawo ebalulekileyo yokufunda neyokuyeka ukufunda (Inkqubo yokufunda neyokuyeka ukufunda yeyokuvumela indawo yokufunda ngaphandle kokugwetywa, ukuvuma ukuyeka izinto umntu azifundileyo ezingadingekiyo ukuze sikhule ngendlela esiyifunayo); ibe
Kwingqungquthela kulapho abantu bethu abaza kukhokela bekhethwa khona ngokungenamkhethe. Aba bantu bakhokelayo baquka Unobhala Jikelele, Isekela Likanobhala Jikelele namanye amalungu eNational Council (NC) yakwaEE.
Kutheni Ingqungquthela yelizwe ye-4 ixesha layo linyenyisiwe lango-2022?
Ubhubhane weCOVID-19 wenze ukuceba Ingqungquthela yelizwe yethu ye-4 kube nzinyana.
Imiqathango karhulumente ngokudibana nangokuhamba, kuquka ukuvalwa kwezikolo neeholide ezinde zonke ezo zinto zibe negalelo ekubeni Ingqungquthela ibe ngelinye ixesha. Ukuqalisa kokunyuka kwamanani okwesithathu abantu abosuleleke yiCOVID kwenzeke ngexesha elinye ebesicebe ukuba neengqungquthela zamaphondo neesemina zangaphambi Kwengqungquthela ngalo, ibe loo nto iyiphazamisile inkqubo yethu – ngoko iNC iye yathatha isigqibo sokuba Ingqungquthela ibe ngo-2022.
Ixesha Lengqungquthela yelizwe ye-4 liye lanyenyiswa lango-2022 njani?
Iofisi Ephetheyo (iyakhokela, ixhase ize yalathise ipolisi namacebo akwaEE ngamaxehsa ekukho ntlanganiso ngawo eNC) iye yathethathethana ne-Equal Education Law Centre (EELC), ukuze ifumane uluvo lwezomthetho ukuze iqonde ukuba uthini kanye kanye Umgaqo-siseko wakwaEE ngokuba Ingqungquthela imele ibe ngaliphi ixesha, nangezigqibo iNC enegunya lokuzenza ngokuba iba nini Ingqungquthela.
I-EELC icebise ukuba Umgaqo-siseko wakwaEE ufuna ukuba Ingqungquthela yelizwe ekukhethwa abantu abakhokela kuyo ukuba ibekhona ubuncinane qho emva kweminyanka emithathu. Le nto ayithethi ukuba Ingqungquthela imele ibe khona ngexesha elinye qho emva kweminyaka emithathu, kodwa ifanele ibekhona malunga qho emva kweminyaka emithathu ibe ngaphambi kokuba kuphele unyaka we-4 igqibele ukubakho Ingqungquthela (Ingqungquthela yethu ye-3 yayingoJulayi 2018).
I-NC yamkela isisombululo sokuba ixesha Lengqungquthela linyenyiswe, ibe ixesha Lengqungquthela yelizwe libekiwe laba ngoAprili 2022.
Indlela Eya Kwingqungquthela
Ilungiselela Ingqungquthela, iEE iba nento abayibiza “indlela eya Kwingqungquthela” injongo yayo kukubeka isiseko Sengqungquthela yelizwe ebangela umdla. Njengoko kucaciswe ngokweenkcukacha apha ngezantsi, indlela eya Kwingqungquthela iqinisa inkululeko yethu apha ngaphakathi; yindawo eyenza amalungu akwaEE abenenxaxheba kwi …; ibe ivelisa abagqatswa abakhethwa ngokungenamkhethe ukuba baye Kwingqungquthela ibe bakulungele kakuhle ukuthatha inxaxheba Kwingqungquthela.
Inyathelo elibalulekileyo kwindlela eya Kwingqungquthela zingqungquthela zamaphondo ezibakho kuwo omahlanu amaphondo esikhona kuwo. Apha, amalungu angamakhulukhulu akwaEE adibana ukuze axoxe ngezinto ekucetyiswe ukuba zitshintshwe kumgaqo-siseko, kubhalwe izisombululo ekufikelelwa kuzo kwiingxoxo zesebe kwaye kukhethwe abagqatswa abaza kuya Kwingqungquthela yelizwe.
Elinye inyathelo elibalulekileyo eliya Kwingqungquthela zisemina ezibakho ngaphambi Kwengqungquthela. Iisemina ezibakho ngaphambi Kwengqungquthela (PCS) zisemina zabagqatswa Bengqungquthela ezilungiselela abagqatswa abanyuliweyo ukuba balungele Ingqungquthela. Malunga neveki enye okanye ezimbini ngaphambi Kwengqungquthela yelizwe, iphondo ngalinye esikulo libanesemina yangaphambi Kwengqungquthela eyenzelwe abagqatswa bephondo kuphela, enale njongo:
Ukulungiselelwa Ingqungquthela kwabagqatswa kwiphondo ngalinye. Into eba ngayo igxininisa kwi:
Indlela ebunjwe ngayo umthetho nenkululeko yakwaEE, indima yeNC namalungu ayo.
Amaxwebhu okuxoxa aveliswe Zikomishoni.
Ukuxoxa nokwenza ngcono izinto ekucetyiswa ukuba zitshintshwe Kumgaqo-siseko nezisombululo ezivele kwiintlanganiso zesebe nakwiingqungquthela zamaphondo.
2. Inkqubo yokunyla abagqatswa abafuna ukuba kwizikhundla zeNC
Kwenziwa ntoni nini Kwindlela eya Kwingqungquthela yelizwe ye-4?
Jan – Feb 2022 – Amaqela olutsha alungiselela Ingqungquthela yelizwe
19 Matshi 2022 – Iingqungquthela zamaphondo
Iingqungquthela zamaphondo zintlanganiso ezinkulu zosuku olunye ezibakho kumaphondo ukuze akhethe abagqatswa abaza kuya Kwingqungquthela yelizwe.
9 Aprili 2022 – Iisemina zangaphambi Kwengqungquthela
Isemina ngaphambi Kwengqungquthela yintlanganiso yabagqatswa abanyuliweyo ukuya Kwingqungquthela ukuba bagqibezele ukukhetha iNC entsha nokujonga izisombululo eziphakanyiswe Kwingqungquthela.
29 Aprili – 2 Meyi – Ingqungquthela yelizwe ye-4 ye-Equal Education
Iza kuba phi Ingqungquthela yelizwe ye-4?
Ingqungquthela yelizwe ye-4 iza kubaseNtshona Koloni.
Ngoobani abaya Kwingqungquthela?
Ingqungquthela yelizwe ye-4 iza kubancinci kunaleyo iEE ibinayo ngaphambili. Le nto yenzelwa ukuze kuthotyelwe nemithetho yokudibana yeCOVID-19.
Inani labagqatswa abavela kwiphondo ngalinye liza kugqitywa ziziphumo zango-2021 zokuhlolwa kweencwadi zokuba lilungu.
Kwiingqungquthela zamaphondo, amaphondo aza kunyula abagqatswa babo abaza kuya Kwingqungquthela. Bamele baquke abo bayela ukuba bazigqatsela ukuba banyulwe Kwingqungquthela yelizwe.
Abasebenzi bethu abaphambili kwilizwe nabantu abazokujonga abavela ngaphandle nabo baza kube bekhona Kwingqungquthela.
Kwenzeka ntoni Kwingqungquthela?
Ingqungquthela iquka ezi nkqubo zibalulekileyo:
Iingxelo ezivela kubantu abakhokelayo abakhoyo ngoku
Usihlalo (intloko yeNC) unikezela ingxelo yendlela iNC eye yawukhokela ngayo umbutho nangezigqibo ezibalulekileyo eziye zathathwa. Unobhala Jikelele okanye Isekela Likanobhala Jikelele (iintloko zomsebenzi wamihla le we-EE) unikezela ingxelo ngeeofisi nangamaphulo e-EE, nangenkqubela eyenziweyo. Unondyebo (unomsebenzi wokuqinisekisa ukuba imali yakwaEE isetyenziswa ngendlela efanelekileyo) unikezela ingxelo yokuba isetyenziswe njani imali yakwaEE nokuba kwenziwe ntoni ukuqinisekisa ukuba i-EE inemali eyaneleyo yokuqhubeka ikho kwixesha elizayo.
Ibhodi ye-Equal Education iza kukhululwa Kwingqungquthela yelizwe ye-
Iiseshoni Kwingqungquthela yelizwe ziza kuba ngezihloko zekomishoni ekugqitywe ngazo ngaphambi Kwengqungquthela.
Kuza kufikelelwa kwizisombululo eziza kugqiba ukuba iEE iza kugxininisa kowuphi umsebenzi kwixesha elizayo.
Ukuba kukho naziphi na izinto ezifuna ukutshintshwa Kumgaqo-siseko wakwaEE, kuza kugqitywa ngazo zize zilungiswe Kwingqungquthela yelizwe.
Unyulo lweNational Council entsha
Abagqatswa abanyuliweyo baza kuza Kwingqungquthela baze bafumane ithuba lokutsho ukuba kutheni kufuneka bakhethwe. Kwingqungquthela yelizwe abagqatswa baza kuvotela iNC entsha ibe abagqatswa abaphumeleleyo baza kwaziswa ekupheleni Kwengqungquthela.
Zeziphi izikhundla zeNational Council ekuza kunyulwa abantu bazo Kwingqungquthela yelizwe?
Kukho izikhundla zeNC eziphambili ezi-6 ekumele kunyulwe abantu bazo Kwingqungquthela:
Usihlalo weNC (umntu ongengomsebenzi wakwaEE)
Amasekela Kasihlalo Ababini (Isekela Likasihlalo elinye limele libe ngumntu omtsha ogqibe isikolo oneminyaka engadlulanga ku-25, elesibini libe ngumntu omtsha ohamba isikolo ongekho ngaphantsi kweminyaka eyi-14 ngexesha aqalisa ngalo kwesi sikhundla)
Unobhala Jikelele (isikhundla esisigxina)
Isekela Likanobhala Jikelele (isikhundla esisigxina)
Amalungu ongezelelekileyo eNational Council entsha (engenayo) angakhethwa Kwingqungquthela okanye ngezinye iinkqubo. Ngala:
Umntu oza kumela iphondo ngalinye avela kulo
Ubuninzi amalungu amabini angabazali
Ubuninzi abantu abahlanu abenza Kulinganwe
Ubuninzi abantu abatsha abahlanu abagqibe isikolo
Ubuninzi amalungu ongezelelekileyo amahlanu
Xa ewonke amalungu eNC kufuneka ubuncinane abeyi-8 kodwa angadluli ku-28.
I-NC ye-EE iyalela amaqela amancinci angamalungu e-EE, anyulwe kumgangatho wesebe, ukuba enze iikomiti ezikhethekileyo. Umsebenzi wekomiti kukuphanda, ukuxoxa nokucebisa ngexwebhu ekuza kuxoxwa ngawo anezinto ezikhethekileyo ekumele kuxoxwe ngazo kwiingqungquthela ze-EE zamaphondo naza kusetyenziselwa njengokhokelo xa kuxoxwa ngezisombululo zethu ezintsha Zengqungquthela.
Amalungu afunekayo kwikomiti nganye ngala: Amalungu amabinieNC (elinye liza kuba ngusihlalo wekomiti), amalungu amabini Okulingana/Okukhokela, Umbhexeshi omnye, umzali omnye nomnye olilungu ngenxa yesigxina sakhe (umphandi wakwaEE)
Kufuneka kubekho amalungu asixhenxe ngekomiti nganye Yekhomishini.
Zintoni izihloko zekhomishini?
Izihloko zekhomishini zizinto okanye imiba ecetyiswe ngamalungu e-EE ukuba kufanele kuthethwe ngazo Kwingqungquthela. Ngokomzekelo, Local & Global Solidarity (Ukuba Yimbumba Yamanyama Ekuhlaleni Nasemhlabeni Wonke) ibisisihloko sekhomishini Kwingqungquthela Yelizwe yesi-3.
Kuza kwenzeka ntoni ukuba asikwazi ukuba Nengqungquthela abaya ubuqu kuyo abantu ngo-2022?
Ubhubhane weCovid-19 uyaqala ukuba khona ibe indlela aza kusichaphazela ngayo kwixesha elizayo ayinakwaziwa kwangaphambili.
Sinethemba lokuba njengoko isitofu sokugonya siye sifumaneka kubantu abaninzi ixesha lokosuleleka kwabantu abaninzi liza kuba lifutshane kwaye kungabi kubi kangako, ize nemiqathango yokudibana ibe mbalwa.
Ungawufumana apha Umgaqo-siseko wakwaEE okanye kwiwebhusayithi yethu.
Leanne Jansen-ThomasIngqungquthela yelizwe ye-4 ye-Equal Education (Ukulingana Kwemfundo) – Imibuzo Edla Ngokubuzwa (isiXhosa) 11.10.2021